အမေရိကရှိ ထိပ်တန်း Fitness Center5ခု - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘလော့ဂ် 2022
အမေရိကရှိ ထိပ်တန်း Fitness Center5ခု
ယနေ့ အမေရိကတိုက်တွင် အဝလွန်သူဦးရေ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အစာစားခြင်းသည် မလွယ်ကူပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားအများစု အထူးသဖြင့် New Yorkers အများစုသည် အလုပ်ချိန်ကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အချိန်နှင့်အမျှ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ကျောင်းသွားခြင်း၊ စာကျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကလေးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲတမ်း ပြေးလွှားနေကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များသည့်အချိန်ဇယားများကြားတွင် ထိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစာစားရန် အချိန်မရှိသောကြောင့် ကယ်လိုရီများပြည့်နှက်လေ့ရှိသော အမြန်နှင့်စျေးပေါသောအစားအစာကိုရရှိစေသည်။
ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာလုံး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာကို မစားနိုင်ရင် ဘာလုပ်မလဲ။ စတင်သူများအတွက် သင်သည် အားကစားခန်းမသို့ တက်ရောက်နိုင်သော်လည်း ထိုသို့သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် မလွယ်ကူပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာတွေ အများကြီးရှိနေတယ်၊ ​​ဘယ်စင်တာက သင့်အတွက် သင့်တော်တယ်ဆိုတာ သင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်မလဲ။
ကောင်းစွာ၊ Medical Daily သည် အမေရိကရှိ ထိပ်တန်းအားကစားရုံ ၅ ခုကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကြံ့ခိုင်ရေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အချက်အလက်များစုဆောင်းခဲ့သည်။
Crunch၊ 24 Hour Fitness၊ Boom၊ Patti နှင့် Allan Herbert Wellness Center နှင့် Sports Clubs တို့သည် အမေရိကရှိ ထိပ်တန်း Gym5ခုအတွက် ဒုတိယရသွားခဲ့သည်။
Crunch သည် ၎င်းတို့၏ သန့်ရှင်းမှု၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားအားကစားရုံများနှင့် ကွဲပြားသည့် ကျောက်တောင်တက်နံရံများအတွက် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
"Crunch က အရမ်းမိုက်တယ်!" Nicole Chaplin, Fitness Enthusiast နှင့် Motivator ဟုဆိုသည်။
"သူတို့မှာ ကျောက်တောင်တက်တဲ့ နံရံနဲ့ တကယ်ကို ရှာရခက်တဲ့ ခြေရာတစ်ခု ရှိပြီး ပျော်စရာလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ အကြိတ်အနယ် ကစားရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်၊ တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းပြီး သူတို့မှာ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေ ရှိပါတယ်" ဟု Chaplin မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
24 Hour Fitness သည် ၎င်းတို့၏ရရှိနိုင်သည့်နာရီများ၊ အတန်းများနှင့် သန့်ရှင်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
"24 Hour Fitness က အရမ်းအဆင်ပြေတယ်၊ ​​24 နာရီဖွင့်ထားလို့ အရမ်းကောင်းတယ်၊ အရမ်းသန့်တယ်၊ သပ်ရပ်တဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတန်းတွေကို ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ သင်တန်းတွေတက်နိုင်တဲ့ spin room လည်းရှိတယ်" ဟုပြောသည်။ Chaplin
Boom ကို တစ်လလျှင် 19.99 ဒေါ်လာအထိ စျေးနှုန်းများဖြင့် ၎င်းတို့၏ တည်နေရာကောင်းနှင့် ယာဉ်စီးခစျေးနှုန်းများအတွက် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
"ဒီ Gym တွေအားလုံးက သန့်ရှင်းပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ သင်တန်းဆရာတွေနဲ့ အဆင်ပြေမှုတွေ ရှိပေမယ့် ဈေးကြီးနိုင်ပါတယ်" ဟု နယူးယောက်မြို့မှ Fitness Trainer Pasha Borsuk ကပြောသည်။
"ကျွန်တော် Boom Fitness ကို အရမ်းကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ တတ်နိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုရဖို့အတွက် ကူညီပေးမယ့် ထိပ်တန်းလေ့ကျင့်ရေးဆရာတွေရှိတာကြောင့် ကျွန်တော် အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်" ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
Patti နှင့် Allan Herbert Wellness Center သည် မိုင်ယာမီရှိ ၎င်းတို့၏ ပြင်ပကျောင်းဝင်းအတွက် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ခံရပြီး၊ ၎င်းတို့၏ သန့်ရှင်းမှု၊ အမျိုးမျိုးနှင့် စက်ကိရိယာများ။
"ကျွန်တော်က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက Gym တော်တော်များများကို မရောက်ဖူးပေမယ့် တော်တော်များများကို ရောက်ဖူးပြီး ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ University of Miami Wellness Center က အကောင်းဆုံးပါပဲ" ဟု Chaplin က ပြောကြားခဲ့သည်။
Patti နှင့် Allan Herbert Wellness Center သည် အလွန်ကြိုဆိုပြီး ၎င်း၏တည်နေရာကြောင့် ကောင်းမွန်သောခံစားချက်ရှိကြောင်း Chaplin မှ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
"ဘာလို့လဲဆို​တော့ Miami မှာတည်ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ ​ကောင်းမွန်​ပြီး ​နွေး​ထွေးတဲ့ အပူပိုင်း​ဒေသ ခံစားချက်​​တွေ​ကြောင့်​ ဘတ်​စကတ်​ဘောကွင်း အတွင်းအပြင်​ အပြင်​ဘက်​၊ အိမ်​တွင်းနဲ့ အပြင်​ဘက်​၊ ​ရေကူးကန်​၊ ​ရေပူကန်​၊ ​ရေချိုးခန်း ၊ ​ရေချိုးခန်း စတဲ့ ​နေရာ​တွေမှာပါ ပါဝင်​​နေပါတယ်​။ … တကယ်ကို အနုပညာဆန်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုပဲ”
"သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုက ထူးခြားပြီး အရမ်းကြိုဆိုပါတယ်… ၎င်းတွင် အိမ်တွင်းရေး မိသားစုအငွေ့အသက်များပါရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်များ ထိုနေရာတွင် ရှိနေရခြင်းကို အမှန်တကယ် သက်တောင့်သက်သာခံစားရစေရန် ကူညီပေးပါသည်။"
ဘော့စတွန်၊ ဝါရှင်တန်၊ ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားနှင့် နယူးယောက်ရှိ တည်နေရာများပါရှိသော အားကစားကလပ်သည် NY အနီးရှိ 55 တည်နေရာဖြင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်နှင့် အနီးဆုံးနေရာများအတွက် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်၊ New York ရှိ မည်သည့်အိမ် သို့မဟုတ် ရုံးအနီးရှိ NYSC အားကစားရုံကို ရှာဖွေရန် အခွင့်အလမ်းများ အလွန်မြင့်မားပါသည်။
“နယူးယော့ခ်အားကစားကလပ်၊ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာ အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေနဲ့ အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ကြတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးတွေထဲကတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲ။ New York Sports Club ကို မမြင်ဘဲ ထောင့်ကို လှည့်လို့မရပါဘူး” ဟု 'A Dumbbell's Path to Great Shape' ၏ စာရေးဆရာ Shaun Ruskin က ပြောသည်။
"သူတို့မှာ အကြီးကျယ်ဆုံး စက်ကိရိယာ ဒါမှမဟုတ် အကြီးကျယ်ဆုံး အတန်းတွေ မလိုအပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အရမ်းအဆင်ပြေစေမယ့် နေရာတွေ အများကြီးရှိတယ်… ဒါကြောင့် မင်းဘယ်မှာနေနေ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ NYSC တည်နေရာကို အမြဲတွေ့လိမ့်မယ်။"
2021 ခုနှစ်တွင် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက် ထိပ်တန်း လေဆာခေါင်းစွပ်4ခု
မင်း ထိပ်ပြောင်နေပြီလား? လေဆာဦးထုပ်များသည် ဆံပင်၏အလုံးစုံကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေလိုသော အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိပ်ဖျားသေဆုံးမှုများကို တားဆီးရန် ဥပဒေကြမ်းကို ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Dry Eye-Eye Drop အတွက် ထိပ်တန်းရွေးချယ်ပါ။
ဒါကတော့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေ့စဉ်ရဲ့ ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုပါ။
နှင်းခူရှိသော ကလေးငယ်များအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေ့စဉ်၏ ထိပ်တန်းခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောခြင်း။
ဤတွင် နှင်းခူရှိသော ကလေးငယ်များအတွက် ပြုလုပ်ထားသော ခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြိုက်ဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
အမျိုးသားများအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေ့စဉ်၏ ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှု
အမျိုးသားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သန့်စင်မှုအတွက် အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှုပါ။